©नरेन्द्रराज प्रसाई •••
इन्द्रबहादुर राईको सबैभन्दा ठूलो मौलिकता हो– खुलस्तपन । त्यही पनका कारणले उनी सधैँ सक्कली कुरा आफूभित्रै बाँध्न सफल भैरहे । राईको. त्यही सक्कली धारणाको एउटा सानो प्रतिबिम्ब हो– ‘‘मैले सबैभन्दा बुद्धिमान्. काम गरेछु सन् १९५० मा मायादेवी थापालाई बिहा गरेर । गृहिणी उनी नभए यो इन्द्रबहादुर राई नहुने र हुँदैन ।’’
भारतमा नेपाली भाषाको दिग्विजयका लागि गोर्खाल्यान्डको स्थापना हुनुअघि नै दार्जिलिङमा इन्द्रबहादुर राईको चिन्तनले ‘प्रान्त परिषद्’को स्थापना भैसकेको थियो । बासभूमि र भाषाको स्थायित्वका लागि त्यस संस्थाको प्रमुख उद्धेश्य रह्यो । त्यस संस्थामा सुभास घिसिङ पनि संलग्न थिए । तर पछिल्ला दिनमा आएर घिसिङले पनि ‘गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’को स्थापना गरे । यो संस्थाको गठन पनि राईले ठीकै मानेका थिए । तर यसै परिवेशमा राई र घिसङि माझ हुरी चल्यो । भनौं घिसङिले नेपाली भाषा मात्र लेखेर पुग्दैन गोर्खा भाषा नै लेखिनु पर्छ भन्न थाले । अनि त्यही नै घिसिङको मुल नारा थियो । तर राईले नेपाली भाषाका शब्दकै आडलाई मात्र सिरानी हालीरहे । वास्तवमा उनी आफ्नै सिद्धान्तमा अडिग थिए । तर उनलाई काबु पार्ने काममा सुभास घिसिङहरू पनि चुकेका थिएनन् । कतिसम्म भने गोर्खा भाषा नलेखे बापत र त्यसको अनुयायी नहुँदा राईका दुबै घरमा बम हानियो र आगो लगाइयो, तर पनि उनको मनमा कहिले बमका छिर्का लागेन र उनका मनमा धुवाँ पसेन । भनौं राईले एकोहोरो आफ्नो अडान छाडेनन् । यसै प्रसङ्गमा उनका मित्र गणेशबहादुर प्रसाईले लेखे ‘‘�